दाजुले १२ वर्षीया अ, शक्त बहिनीलाई जंगल लगेर अ’ नै, तिक कार्य गरे, ला, श झाडिमा भे, टियो ! – Dainik Sangalo
दाजुले १२ वर्षीया अ, शक्त बहिनीलाई जंगल लगेर अ’ नै, तिक कार्य गरे, ला, श झाडिमा भे, टियो !
October 20, 2020 360
काठमाडौं । पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि अ’नै, ति, क कार्यहरु लगातार बढ्दैछन् । यो बीचमा भारत गुजरातको बनसकन्थबाट आएको एक खबरले सबैको होस उडाएको छ ।
यहाँ डीसाको शहरमा एउटा ड, र ला, ग्दो घ, ट, ना भएको छ । एक १२ वर्षीया बालिका जो शा, ररीक रुपमा अ, श, क्त थिइन् । उनको ला, श जंगलको झाडीमा फे, ला पारिएको छ ।
प्रहरीले प्रारम्भिक अ, नु, स, न्धा, नमा पहिले अति निन्दनीय अ’ नै, ति, क कार्य गरेर पछि ला, श बनाइएको जनाएको छ । यस घ, ट, नालाई अ, नु, स, न्धा, न गर्ने क्रममा प्रहरीले एकजनालाई नि, यन्त्रणमा पनि लिएको छ ।
आ, रोपित २५ वर्षीय युवक ति बालिकाका आफन्त पर्छन । जानकारी अनुसार प, क्रा, उ पर्ने व्यक्ति नाताले ति बालिकाका दाई पर्छन । घ, ट, नाको बारेमा जानकारी दिदै दन्तीवाडा प्रहरीले टाउको नभएको ला, श शनिबार फेला पारेको जनाएको छ ।
बालिका बनसकन्थको डिसाबाट शुक्रबार ह, रा, ए, की थिइन् । अ, नु, स, न्धा, नमा यो कुरा पनि बाहिर आएको छ कि त्यस दिन ती युवकले बालिकालाई आफूसँगै बाइकमा लगेर जंगलतर्फ गएका थिए । प्रहरीका अनुसार ति व्यक्तिले बालिकालाई पहिले अ’ नै, ति, क काम गरे त्यसपछि उनको जीवन लिएको हुनुपर्छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक कुशल ओझाले भने, ‘हामीले लाशलाई दन्तीवाडाको मोती भाखर गाउँ नजिकै सुनसान ठाउँमा भे, ट्टायौं । १२ वर्षीया बालिकासँग अ’ नै, ति, क कार्यपछि ज्या, न लिएको आ, शं, का छ ।
आ, रोपित युवक ती बालिकाका नाताले दाई हुन् भनेर पहिचान गरिएको छ ।’ प्रहरीले ला, शलाई परीक्षणको लागि पठाइएको जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदन पर्खाइमा नै रहेको छ । त्यस पछि थप कानुनी कारवाही गरिने प्रहरीले जानकारी दिएको छ । जनवोलीबाट
Prevबिधुवा भत्तामा कटौती , ६० वर्ष ननाघेका एकल महिलालाई मासिक २ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता
Nextसामान्य रुघाखोकी र कोरोना संक्रमण कसरी चिन्ने ?
धुर्मुस सुन्तलीले निर्माण गरेको नमूना बस्तीमा चिसोका कारण ३५ दिनकी सुत्केरी, नवजात शिशु र एक बालकको मृ, त्यु